Eternal Bliss: बर्सेनि १० हजार घर थपिँदो
बर्सेनि १० हजार घर थपिँदो
काठमाडौं, उपत्यकामा वर्षको १० हजार घर थपिनाले भूमिगत खानेपानीमा प्रत्यक्ष असर परेको अध्ययनले देखाएको छ ।
बर्सेनि निर्माण हुने घरले कम्तीमा ३ हजार रोपनी जमिन ढाक्ने हुनाले भूमिगत पानी पुनः पूरण -रिचार्ज) हुन नपाई उपत्यकामा सतहमुनिको पानी सुक्ने अध्ययनमा छ । खारेज हुनुअघिको जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले गराएको अध्ययनले यही दरमा उपत्यकाको जमिन घरहरूले ढाक्दै जाने हो भने आगामी दिनमा एक थोपा पानी जमिनमुनि घुस्न नपाउने उल्लेख छ ।
सन् २००१ को तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा ३ लाख ४५ हजार घरधुरी छन् । उपत्यकामध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा मात्र २ लाख ३५ हजार घर छन् । यिनले १६ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि ओगटेका छन् ।
जमिन र वातावरणमाथि खराब असर नपारीकन उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोत उपयोगिताको अवस्था अध्ययन गराउन अघिल्ला वर्ष समितिले अध्ययन गराएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा विज्ञहरूको परामर्श लिने क्रममा बुधबार आयोजित कार्यशालामा विज्ञ डा. सुरेशदास श्रेष्ठले भने, 'भूमिगत पानी नियमन नगर्ने हो भने ठूलो खतरा आइलाग्ने छ ।'
तीव्र सहरीकरण र बढदो जनसंख्याले भूमिगत पानीमा चाप बढिरहेको छ । खानेपानी, उद्योग, कलकारखानाले भूमिगत पानी उपयोग गरिरहेकाले वर्षको २ दशलमव ५ मिटरका दरले भौगर्भिक पानीको सतह घटिरहेको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सन् १९८४ मा बाँसबारीमा ४८ दशमलव शून्य ८ मिटर गहिराइमा पानी आउने गरेकामा सन् २००० मा त्यस्तो गहिराइ ८२ दशलमव ५ मिटर पुगेको छ ।
उपत्यकामा ७ सयभन्दा बढी डिप ट्युबवेल छन् । डिप ट्युबवलेले कम्तीमा २ सय मिटर गहिरोमा गएर जमिनमुनिको पानी झिक्ने गरेका छन् । ट्युबवेलको पानी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड -केयूकेएल), होटलहरू, उद्योग प्रतिष्ठान र घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ ।
खानेपानी संस्थान, प्लास्टिक टेक्सटाइल, बोटल उद्योग, डाइङ तथा कार्पेट उद्योग, होटल, राजदूतावास, प्रतिष्ठान, हाउजिङ कोलोनी आदि गरी दैनिक करिब ५ करोड लिटर भूमिगत पानी दोहन हुने गरेको उक्त अध्ययनमा छ । केयूकेएलले यो वर्ष ४९ वटा विभिन्न ट्युबवेलबाट दैनिक २ करोड ३५ लाख लिटर पानी दोहन गरेको छ ।
Posted on: 2009-07-09 20:16:27
Posted by Happiness Seeker at 1:48 AM
कलाकारले नेतालाई जिते
माओवादीद्वारा पदमार्ग निर्माण
८८ जनाको मृत्युपछि जाजरकोटमा स्वास्थ्य टोली
वर्षकै ठूलो ट्राफिक जाम
Nepal govt's birthday gift to Gyanendra
सिंचाइ मन्त्रालयमा एक्लो कर्मचारी
सीमा मिचिएको संसदीय समितिको ठहर
माओवादीसँगको सम्बन्ध र राष्ट्रिय सरकार
Nepal: Tibetan leaders from India gather in Mustan...
नारायणहिटी मैले छाडेपनि नेपाल शान्त, सम्बृद्ध भएन ...
प्रधानमन्त्री नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डवीच भ...
हाइ एलर्टका लागि पृतनालाई कटवालको परिपत्र
नयाँ भर्तीका लागि सेनाद्वारा पत्राचार
Firms Hire Hundreds Of Former Lawmakers And Congre...
Nepali woman gang raped in Delhi
अन्तिम ओभरमा लगालग पाँच विकेट
त्रिचन्द्रमा विद्यार्थीबीच भिडन्त
दलाई लामा र ६ सभासद भेट
10 humor sites sure to make you LOL
'नेपालमा वर्षेनी २० हजारलाई विषालु सर्पले टोक्छ'
संविधानसभा भंगको तयारी : भट्टराई
कहाँ-कहाँ मिचियो नेपालको सिमाना
यसरी भयो ख्यातीको हत्या
Mitochondrial and Y-chromosome diversity of the Th...
बजेट गतिरोधले अधिकारीहरु अलमल्ल
भारतीय राजदूतलाई सेना समायोजनको चासो